Global Voices teny Malagasy » Shina: Rafitra fanaraha-maso ny Wi-Fi any amin’ireo toeram-pisotroana kafe sy toaka any Beijing · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Jolay 2011 6:39 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika miora
Sokajy: Shina, Fitsipika
Araka ny Mingpao Daily , namoaka filazana ho an'ireo toeram-pisotroana kafe sy toaka izay manome fahafahana mampiasa Wi-Fi an'ireo mpanjifany mba hametraka fomba fanaraha-maso mitentina RMB20,000 ny mpitandro filaminana ao Beijing. Amin'ny fametrahana ny rindrambaiko, tsy maintsy mitahiry ny ID-ny ao anatin'ny kaontera ireo mpampiasa alohan'ny hidirany ao amin'ilay tambajotran'ny Wi-Fi.
Navoakan'ny mpitandro filaminana ao Beijing teo amin'ny manodidina ny faran'ny volana Jona teo io filazana io, izay natao ho an'ny toeram-pisotroana kafe, fivarotam-boky, sy fisotroan-toaka izay manome fahafahana hiditra Wi-Fi maimaim-poana ho an'ireo mpanjifany. Raha mandà izany izy ireo, dia tsy hahazo alalana hanome ny tolotra Wi-Fi maimaim-poana.
Antsoina hoe “fanaraha-mason'ny fandriampahalemana amin'ny tambajotra tsy itadiavana tombontsoa manokana” io rafitra io, ny saran'ny fametrahana dia miovaovao eo amin'ny RMB 2 – 40,000 dollars eo. Afaka manara-maso mpanjifa 100 amin'ny fotoana iray mitovy io rafitra io ary ny tahirin'ny takelaka nampiasan'izy ireo dia voatahiry ao anatin'ny rafitra mandritra ny 60 andro. Manambara io “filazana” io fa ho an'ireo izay mandà ny fametrahana ity rafitra ity dia hiharan'ny sazy RMB15,000. Afaka mampiato ny fahazon-dàlana handraharaha ihany koa ny mpitandro filaminnana.
Inoana fa hampiharina any amin'ireo tanàna hafa ihany koa io fomba io aorian'ny andrana atao ao Beijing. Nilaza tamin'ireo mpanao tatitra ny mpitandro filaminan'ny Ditrikan'ny Tanàna Antsinanan'i Beijing fa manampy ireo mpitandro filaminana handringana ny fandikan-dalàna be vava izany rafitra izany. Na eo aza anefa izany, mihevitra ireo mpampiasa Aterineto fa fanitsakitsahana ny fiainana manokan'ny mpampiasa izany rafitra fanaraha-maso izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/07/30/20295/
 Mingpao Daily: http://news.sina.com.hk/news/9/1/1/2392491/1.html